Mampiantrano Ny Fifaninanana Voalohany Ho An’ny Vazimba Teratany Mpanapariaka Vaovao I Norvezy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2012 2:03 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 繁體中文, English
Sivy taminà mpifaninana 24 no voafantina hiatrika ny famaranana tao amin'ny sokajy fanadihadiana ifotony ho an'ny loka WITBN Indigenous Journalism Awards (2012 WIJA). Ny lanonana dia hatao ao Kautokeino, Sápmi, Norvezy.
Ny fanambaràna ofisialy avy amin'ny WIJA dia manazava hoe :
Ny WIJA 2012 no voalohany amin'ny loka iraisam-pirenena natokana ho an'ireo ezaka avy amin'ny mponina vazimba teratany momba ny fanaovan-gazety anaty fahitalavitra sy amin'onjam-peo. Raha ny fepetra ankapobeny sy ny fototry ny asa no tena ain-dehiben'ity fankasitrahana ity, ny loka amin'ny maha-loka azy manokana dia mitodika amin'ny fanasongadinana ireo ezaky ny vazimba teratany manadihady ny tantara avy ao an-toerana, manerana ny firenena na ny fiantraikany eran-tany.
Ity lahatsary ity dia mampiseho ireo tafita amin'ny famaranan'ny 2012 avy amin'ireo tambajotran'ny zavimba teratany any amin'ireo firenena mandroso toa an'i Taiwan, Australia, Norvezy, Kanada, New Zealand, ary Etazonia.
Ny iray tamin'ireo fanadihadiana voafantina, avy amin'ny fahitalavitra Māori, Aotearoa New Zealand, dia mandrakotra ny azo lazaina hoe “Occupy Easter Island / Bodoy ny Nosy Paka” (io dia nanomboka efa ho herintaona talohan'ny hetsika “Occupy” tany Etazonia), hetsi-panoherana zara raha mba taterina ataon'ireo mafàna fo Rapanui izay nibodo hotely iray an'ny governemanta nandritra ny enim-bolana, nangataka ny hanekena ny zon'ireo vazimba teratany sy hanehoany ny tsy maha-ara-drariny ny fibodoana.
'Vonona ny ho faty ho an'ny taninay izahay' hoy ny mafàna fo Rapanui iray tao anaty fandaharan'ny fahitalavitra Maori any New Zealand
Ny Nosy Paka (na Rapa Nui) dia nosy iray izay nanery ireo vazimba teratany hikisaka aminà faritra faran'izay kely tao amin'ilay nosy noho ny fanjanahantany, ary any ny fizahantany dia niteraka toe-karena tsy mari-toerana. Ny olan'ny fivoarana maharitra dia manerana ireo tolona ataon'ny vahoaka vazimba teratany manerana izao tontolo izao mba ho afa-mivelona sy hitahirizana ny kolotsain-dry zareo.
Ny fampiasàn'ireo vazimba teratany ny fanapariaham-baovao amin'ny alalan'ny onja sy ny teknolojia maoderina mba hanandratana ny zon'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo dia efa dingana iray mankany aloha. Vakio misimisy kokoa ato ny mikasika ireo tafakatra amin'ny famaranana sy ny fandaharan'izy ireo.